Ukuphuhliswa kweM1 Garand - iMfazwe yeMfazwe yesiBini II
Imbali kunye neNkcubeko Izixhobo kunye neZixhobo
I-M1 Garand yayisisigxina sokuqala sokuzenzekela umkhosi wonke. Uphuhliswe kuma-1920s no-1930, i-M1 yenzelwe nguJohn Garand. Ukudubula i-.30-06 ngeenxa zonke, i-M1 Garand yayisisixhobo esiluncedo esasetyenziswa ngama-US ngexesha leMfazwe Yehlabathi II kunye neMfazwe yaseKorea.
I-Army yase-United States yokuqala iqale umdla wayo kwiibhokhwe ezizenzekelayo ngo-1901. Oku kwaxhaswa ngowe-1911, xa uvavanyo lwaluqhutywe ngokusebenzisa iBang kunye ne-Murphy-Manning.
Iingcamango zaqhubeka ngexesha leMfazwe Yehlabathi I kwaye zilingo zaqhutywa ngo-1916-1918. Ukuphuhliswa kwesibhamu ngokuzenzekelayo kwaqala ngokunyanisekileyo ngo-1919, xa i-Army yaseUnited States iphetha ukuba i-cartridge yesibhamu sayo senkonzo, i- Springfield M1903 , yayinamandla kakhulu kunokuba iyadingeka kwiindawo zokulwa eziqhelekileyo. Kwangaloo nyaka, umqambi owaziwayo uJohn C. Garand wayeqeshwe kwiSouth Armory Armory. Ukukhonza njengonjiniyela oyintloko wabasebenzi, uGarand waqala ukusebenza ngesibhamu esitsha.
Isakhiwo sakhe sokuqala, i-M1922, sasilungele ukuvavanywa ngo-1924. Le nto yayinemilinganiselo ye .30-06 kwaye ibonakalise i-brree-operated breech. Emva kokuvavanya okungekho ngokuthe ngqo kwezinye izibhamu ezizenzekelayo, uGarand uphucule ukuyila, ukuvelisa iM1924. Izilingo ezongezelelweyo ngo-1927 zivelise umphumo ongathandekiyo, nangona uGarand waqulunqa i-276 caliber, imodeli esebenzayo igesi esekelwe kwiziphumo. Ngentwasahlobo ka-1928, ii-Infantry kunye neebhodi zamahashe zagijimela izilingo ezibangelwa i .30-06 M1924 i-Garand iyanqanyulwa ngokuthanda imodeli .276.
Omnye wabini abagqityiweyo, isibhamu sikaGarand sathengisana ne-T1 Pedersen entwasahlobo ka-1931. Ukongeza, enye i-Garanti .30-06 yavavanywa kodwa yaxothwa xa i-bolt yayo iphelile. Ukutshatyalaliswa ngokukhawuleza kwePedenen, i-276 Garand yacetyiswa ukuba iveliswe ngoJanuwari 4, 1932. Kungekudala emva koko, uGarand wabuyela ngokuphumelelayo umzekelo .30-06.
Emva kokuva iziphumo, uNobhala weMfazwe kunye noMphathi oyiNtloko kaBasebenzi uGeneral Douglas MacArthur , abangazange bamthande ukunciphisa ama-calibers, walela umsebenzi ukuba unqande .276 kwaye zonke izibonelelo zijoliswe ekuphuculeni umzekelo .30-06.
Ngomhla ka-Agasti 3, 1933, isibhamu sikaGarand sachongwa ngokutsha kweSemi-Automatic Rifle, Caliber 30, M1. NgoMeyi wonyaka olandelayo, iiphantshi ezintsha ezingama-75 zanikezelwa ukuvavanya. Nangona iingxaki ezininzi zaxelwa nge sixhobo esitsha, uGarand wakwazi ukuwalungisa kwaye isibhamu sakwazi ukulungiswa ngoJanuwari 9, 1936, kunye nomzekelo wokuqala wokuvelisa owenziwe ngoJulayi 21, 1937.
I-Cartridge: .30-06 Springfield (7.62 x 63mm), 7.62 x 51mm NATO
Ubungakanani: isicatshulwa se-8-round en bloc efakwe kumaphephancwadi yangaphakathi
Umzzle Velocity: 2750-2800 ft / sec.
Udidi olusebenzayo: ama-yds ama-500.
Umlinganiselo womlilo: 16-24 imijikelezo / ngomzuzu
Ubukhulu: 9.5 lbs.
Ubude bombhobho: 24 in.
Iimbonakalo: Umbono ongemva kwempembelelo, ubuso bombono we-barleycorn
Isenzo: I- gas-operated w / rotten bolt
Inani elakhiweyo: malunga. 5.4 yezigidi
Izixhobo: I- M1905 okanye i-bayonet ye-M1942, isihlomelo se-grenade
Umagazini & Umsebenzi
Ngelixa uGarand wayeyilwe i-M1, i-Army Ordnance yafuna ukuba isibhamu esitsha sibe nephephancwadi elinqambileyo, elingabonakaliyo.
Kwakuyiko lokuba igazini elinokutsha liza kulahleka ngokukhawuleza ngamasosha ase-US ensimini kwaye liza kwenza ixhoba lenzeke ngakumbi ngenxa yokungcola kunye nenkunkuma. Ngalo mfuneko engqondweni, uJohn Pedersen wadala i-clip ye "clip block" evumela ukuba iimpawu zifakwe kumaphephancwadi. Ekuqaleni le magazini yayifanele ukuba ibambe iinqwelo ezilishumi .276, nangona kunjalo, xa utshintsho lwenziwe .30-06, isakhono sancitshiswa sibe sesibhozo.
I-M1 isetyenziswe isenzo esisetyenziswa gesi esetyenziselwa ukwandisa i-gases kwikhiloji ekhutshweyo ukuya ekamelweni elilandelayo. Xa isibhamu saxoshwa, iigesi zasebenzisa i-piston, eyayiqhubezela intonga yokusebenza. Intonga yaqhuba i-bolt ejikelezayo eyayijika yajikeleza ujikelezo olulandelayo. Xa iphephancwadi lichithwe, isiqhotyoshelweyo siza kukhishwa kunye nesandi esicacileyo esithi "ping" kwaye i-bolts ivalwe evulekile, ilungele ukufumana isiqeshana esilandelayo.
Ngokuchasene nenkolelo eninzi, i-M1 ingalayishwa kwakhona ngaphambi kokuba iqhotyoshelwe ngokupheleleyo. Kwakhona kunokwenzeka ukulayisha iilaydidiji enye kwiqhosha elilayishiwe.
Ngethuba lokuqala, i-M1 yahluthwa yiingxaki zokuvelisa ezithintela ukuhanjiswa kokuqala ukuya ngoSeptemba 1937. Nangona i-Springfield yakwazi ukwakha i-100 ngosuku ngeminyaka emibini kamva, ukuveliswa kwexesha kwakutshanje ngenxa yokutshintshwa kwenkomo yombhobho kunye ne-gas silinda. NgoJanuwari 1941, ezininzi iingxaki zazisombulula kwaye ukunyuka kwanda kwanda kuma-600 ngosuku. Olu khuliso lenze ukuba i-US Army ixhotyiswe ngokugcwele neM1 ngasekupheleni konyaka. Isixhobo saye safunyanwa yi-US Marine Corps, kodwa ngezinye iinkcukacha zokugcina. Kwakungekho kwada phakathi kweMfazwe Yehlabathi II ukuba i-USMC yaguqulwa ngokupheleleyo.
Endle, i-M1 yanikela i-American infantry inzuzo enkulu yokuxhoma umlilo kumasosha ase-Axis ayenamaphunjethi athatyathwayo njengamaKarabiner 98k . Ngendlela yokusebenza ngokuzenzekelayo, i-M1 yavumela amabutho ase-US ukuba agcine amazinga aphezulu asemlilweni. Ukongeza, i-cartridge ye-M1 yindleko .30-06 inikezela ngamandla angaphezulu aphezulu. Isibhamu sasiyimpumelelo kangangokuthi iinkokheli, ezifana noGeorge S. S. Patton , zayincoma ngokuthi "yinto ephumelelayo enkulu yokulwa." Ukulandela imfazwe, i-M1s kwi-arsenal yase-US yahlaziywa kwaye kamva yabona isenzo kwiMfazwe yaseKorea .
I-M1 Garand yahlala inqununu yenkonzo ye-US Army kude kubekwe ukufakwa kwe-M-14 ngo-1957.
Nangona kunjalo, bekungekho ngo-1965, ukuba utshintsho oluvela kwi-M1 lwagqitywa. Ngaphandle kwe-Army yase-US, i-M1 yahlala enkonzweni ngemikhosi ye-reserve ukuya kuma-1970. I-Overseas, i-surplus M1s yanikezelwa kwiintlanga ezifana neJamani, iItali kunye neJapan ukuncedisa ekwakhiweni kwazo iintshaba emva kweMfazwe Yehlabathi II. Nangona besethathe umhlala phantsi ekusebenziseni impi, i-M1 isasaziwa ngamaqela okuloba kunye nabaqokeleli basekuhlaleni.
Imfazwe Yehlabathi II: iM4 Sherman Tank
Imfazwe yeHlabathi ye-AK-47
Imfazwe Yehlabathi I: I-Renault FT-17 Tank
Imfazwe Yehlabathi II: "Umfana Omncinci" Ibhomu le-Atomic
Imfazwe Yehlabathi II: iTiger ITank
I-American Revolution: "Brown Bess" Musket
Funda i-Conjugations yesiFrentshi ye "Rougir" (kwi-Blush)
Indlela yokusebenzisa iiWills kunye neeRekhodi zeMpahla zokuFunda malunga nabadala bakho
Iifayili zokuqokelela kunye nezibonelelo
I-Last Mile Inkinga
I-Honey bee (Apis mellifera)
Inkcazo yeSigqeba seziGqeba kunye nendlela yokuSebenzisa